Cutterhead Dredges dia manomboka ny tetikasan'ny dredging Altamira Port - Ellicott Dredges
Ny kompana seranan'i Altamira ao amin'ny fanjakan'i Tamaulipas, Mexico, dia iray amin'ny seranan-tsambo efatra lehibe indrindra any Mexico. Ny Altamira dia tafiditra ao anaty orinasa lehibe natokana ho an'ny indostria voatokana toy ny LNG, ny petrochemical, ny indostria ary ny entana.
Amin'izao fotoana izao, dredge Ellicott roa no miasa na hanomboka tetikasa dredging seranan-tsambo ao Altamira. Ny dredge Ellicott Series 670 Dragon® dia ampiasaina ankehitriny hanatanterahana fikojakojana mahazatra amin'ny làlana fitetezana sy fidirana ho an'ny tobin'ny indostrialy tsy miankina. Raha ny marina, ilay dredge cutterhead somary salantsalany dia misy paompy 14 "x14" miaraka amin'ny heriny 800 HP (597 kW) napetraka. Ilay dredge koa dia afaka mihady hatramin'ny 42 ft (12.80 m). Ity dredge marobe ity dia mahavita mitantana fampiharana isan-karazany amin'ny fitrandrahana, toy ny seranan-tsambo, seranan-tsambo ary tetikasa fikojakojana ny lalan-drano.
Ny 670 dia niaraka tamin'i Ellicott Series 1270 Dragon® dredge, izay hampiasaina amin'ny fanitarana terminal indostrialy tsy miankina iray hafa ao Altamira. Ny Ellicott 1270 mahery dia misy paompy 18 "x18" sy herinaratra napetraka 1350 HP (1007 kW). Ny dredge cutterhead lehibe kokoa dia afaka mahatratra hatrany amin'ny 50 ft (15 m).
Miaraka amin'ny laharam-pahamendrehana avo lenta sy maharitra ary azo itokisana, i Ellicott® dia mirehareha manana andraikitra lehibe amin'ny asan'ny sambo Altamira port.